Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Dalka | Gobolka » United Arab Emirates » Madaxweynaha Imaaraadka Carabta iyo Amiirka Abu Dhabi oo geeriyooday
Madaxweynaha Imaaraadka Carabta Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Wakaalladda Wararka Imaaraadka ee WAM ayaa sheegtay inuu geeriyooday Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, waxaana geeriyooday Amiirka Abu Dhabi iyo Madaxweynaha Imaaraadka Carabta (UAE). Sheekh Khaliifa waxa uu ahaa 73 jir, waxaana uu la tacaalayay xanuun dhowr sano ah.
"Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Madaxtooyada ayaa ku dhawaaqday in 40 maalmood oo baroor diiq ah oo rasmi ah ay jiri doonaan calanka Jamhuuriyadda, saddex maalmoodna la xirayo wasaaradaha iyo hay'adaha dowladda ee heer federaal iyo heer degmo iyo kuwa gaarka loo leeyahay," WAM ayaa soo dhigtay barteeda Twitter-ka maanta.
Sheekh Khaliifa marar dhif ah ayaa lagu arkay fagaarayaasha tan iyo markii uu istaroogga ku dhacay sannadkii 2014-kii, iyadoo walaalkiis, dhaxal-sugaha Abu Dhabi Mohammed bin Zayed (oo loo yaqaan MBZ) loo arkay inuu yahay hoggaamiyaha dhabta ah iyo go'aamiyaha go'aamada waaweyn ee siyaasadda dibadda, sida. ku biiritaanka dagaalka Sucuudigu hogaaminayo ee Yaman iyo in ay hormuud ka noqdaan cunaqabataynta dalalka jaarka ah Qadar sanadihii ugu dambeeyey.
"The UAE waxay lumisay wiilkeedii xaqa ahaa iyo hoggaamiyihii 'wajiga awoodsiinta' iyo ilaaliyaha safarkeeda barakeysan," MBZ ayaa ku yiri Twitter-ka, isagoo ammaanay xigmadda iyo deeqsinimada Khalifa.
Sida ku cad dastuurka, madaxweyne ku xigeenka iyo ra'iisul wasaaraha Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, oo ah xaakimka Dubai, ayaa u shaqeyn doona madaxweyne ilaa golaha federaalka ee kooxaha taliyayaasha todobada imaaradood ay kulmaan 30 maalmood gudahood si ay u doortaan madaxweyne cusub.
Tacsida ayaa ka bilaabatay madaxda Carabta, sida boqorka Baxreyn, madaxweynaha Masar iyo ra'iisul wasaaraha Ciraaq.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ka tacsiyeeyay geerida Sheekh Khaliifa, oo uu ku tilmaamay "saaxiibka dhabta ah ee Mareykanka".
“Waxaan si qoto dheer u qiimeynay taageeradiisa ku aaddan dhisidda iskaashiga aan caadiga ahayn ee waddamadeenu ku naaloonayaan maanta. Waanu ka baroor diiqaynaa geeridiisa, waanu ku ixtiraamaynaa dhaxalkiisa, waxaana ka go’an saaxiibtinimada iyo iskaashiga aan la leenahay Imaaraadka Carabta,” ayuu yidhi.
Sheekh Khaliifa waxa uu xukunka qabtay sannadkii 2004-tii, waxaana uu ka noqday dalka Imaaraadka ugu qanisan Abu Dhabi, waxaanu noqday madaxa dawladda. Waxaa la filayaa in uu xilka Abu Dhabi ku beddelo dhaxal sugaha Amiir Sheekh Maxamed.
Abu Dhabi oo haysata inta badan hantida saliidda ee dalalka Khaliijka, waxa ay xilka madaxtinimo haysay tan iyo markii la aasaasay xidhiidhka Imaaraadka Carabta oo uu aasaasay Aabihii Sheekh Khaliifa, Sheekh Zayed bin Sultan Al Nahyan, sannadkii 1971-kii.
Ku-xigeenka Shabakadda Dalxiiska Adduunka ee Arrimaha Caalamiga, Alain St. Ange ayaa yiri: “WTN waxa ay tacsi u direysaa qoyska, dowladda iyo shacabka Imaaraadka Carabta ee uu ka baxay Allaha u naxariistee Sarreeye Gaas Sheekh Khaliifa, oo ah hoggaamiyaha Imaaraadka. Marxuumku waxa uu ahaa Naqshade Dhabta ah oo Qarankiisa wax ka dhisay, waxana ay tebi doonaan dhammaan asxaabta Imaaraadka.
"Anigoo ku hadlaya magaca madaxda WTN ee ka socda Bulshada Qaranka iyo magacayga, fadlan aqbal naxariis daacad ah xilligan adag."
Abu Dhabi 31aad International Book Fair oo soo bandhigtay ajande xiiso leh
GVB wuxuu isu diyaarinayaa kororka la filayo ee safarka ka imanaya...
Xiddiga Japan Rock Yoshiki wuxuu leeyahay mashruuc sir ah oo cusub
Sidee dadka Ruushku uga falceliyaan cunaqabataynta reer galbeedka?
Xogta Wanaagsan ee Daawaynta Ka Hortagga ah ee daba-dheeraatay